China pp corrugated nchekwa onu Manufacturer na Supplier | Sihai
pp oghere mpempe akwụkwọ
esd pp oghere mpempe akwụkwọ
pp oghere mpempe akwụkwọ, p corrugated mpempe akwụkwọ
pp corrugated mpempe akwụkwọ na eva, epe ụfụfụ
p corrugated igbe
p corrugated nchekwa onu
pp corrugated ntụgharị igbe
p corrugated igbe maka awara awara
esd pp corrugated ntụgharị igbe
p corrugated ntụgharị igbe na etiti
pp oghere oyi akwa
pp oghere kalama pad
pp oghere mpempe akwụkwọ silk spins oyi akwa
pp corrugated mpempe akwụkwọ maka mgbasa ozi
pp oghere ntuli aka oghere
pp oghere mpempe akwụkwọ oghere
pp corrugated mgbasa ozi board
pp corrugated mpempe akwụkwọ maka owuwu
p corrugated n'ala chebe mpempe akwụkwọ
pp corrugated osisi nche
Pp corrugated storages onu ka pp ike metal, pp corrugated board bụ a mgbidi na oyi akwa na mpe mpe maka nchekwa onu, dị iche iche onu size, pp oghere mpempe akwụkwọ nwere ike ahaziri mere dị iche iche size, pp corrugated mpempe akwụkwọ nwekwara ike n'ogige atụrụ, pp corrugated board ejima-mgbidi bụ zuru okè iji chebe ngwaahịa mgbe na-akpụ akpụ na ntụgharị.
Pp corrugated storages onu ka pp ike metal, pp corrugated board bụ a mgbidi na oyi akwa na mpe mpe maka nchekwa onu, dị iche iche onu size, pp oghere mpempe akwụkwọ nwere ike ahaziri mere dị iche iche size, pp corrugated mpempe akwụkwọ nwekwara ike n'ogige atụrụ, pp corrugated board ejima-mgbidi bụ zuru okè iji chebe ngwaahịa mgbe na-akpụ akpụ na ntụgharị. P corrugated nchekwa onu na mpịachi mpịakọta ụlọ, onu nru ububa, artful siri ike onu, na ntụgharị nkwakọba nchekwa onu, metal onu, wdg, bụ a ọkọlọtọ akpa lọjistik, tumadi na-eji arọ ma ọ bụ nnukwu ngwongwo nchekwa na mechanized revolving ahụ, karịsịa kwesịrị ekwesị maka eji ụlọ ọrụ dịka ụgbọ ala, ngwa ụlọ, igwe, ngwaike, na Europe na United States na Japan, Taiwan na mpaghara ndị ọzọ ejirila.
Isi ihe dị na oghere oghere oghere bụ obere carbon waya waya na pp corrugated board. Mgbe oghere nchekwa ahụ tọgbọ chakoo, enwere ike apịaji ya ma chekwaa ya iji ohere zuru oke. Ka ọ dị ugbu a, a na-akwakọba ihe nchekwa ebe a na-akwakọba ihe, na-ebugharị ma na-ebugharị, ma na-aghọwanye ihe dị mkpa maka logistics maka ịgbagharị.
Pp oghere efere nchekwa onu Ọdịdị atụmatụ:
1. Ejiri nkọwapụta, ikike edozi, nchekwa doro anya, ụlọ nkwakọba ihe dị mfe.
2. Forklift, ibuli na kreen nwere ike iji nchịkọta anọ na ibe ya iji ghọta ebe nchekwa atọ.
3. Mfe ọrụ, obosara ngwa na ogologo ọrụ ndụ.
4, ojiji nke ike ígwè waya aka ịgbado ọkụ, na ala nke U-ọwa ịgbado ọkụ mkwado, ọzọ siri ike Ọdịdị.
5. Na forklift, trolley, hydraulic pallet truck na akụrụngwa ndị ọzọ, enwere ike iji ya maka njem, njikwa, ibudata na ibudata, nchekwa na njikọta logistics ndị ọzọ.
6. pp oghere eji dị liner iji gbochie leakage nke obere ihe na chebe loading workpiece.
Nke gara aga: pp corrugated mpempe akwụkwọ na eva, epe ụfụfụ
Osote: p corrugated ntụgharị igbe na etiti
Okwu: No.26th Building, Tianliao 2nd Industry Area, Gongming Town, Guangming District, Shenzhen City, China
Ekwentị & WhatsApp: + 86-18138249095